जनयुद्व दिवस : पार्टी छिन्नभिन्न, कार्यकर्ता खिन्न !
Sat, Mar 23, 2019 | 08:15:06 NST
19:53 PM ( 1 year ago )
Total Views: 5.0 K
लक्ष्मण शर्मा/उज्यालो ।
काठमाडौं, फागुन १ – आज जनयुद्व दिवस विभिन्न पार्टीमा विभक्त माओवादीहरुले आफ्ना आफ्नै ढंगले कार्यक्रम गरेर मनाएका छन् । कुनै समय काठमाडौंको खुला मञ्चमा लाखौ कार्यक्रता उतारेर कार्यक्रम गर्ने माओवादी आज विभक्त भएर पार्टी कार्यालयमा कार्यक्रम गर्न वाध्य भएको छ ।
लामो संघर्ष र १० वर्षे जनयुद्वमा सँगसँगै रहेका माओवादी आजको दिनसम्म आउँदा फुटेर टुक्राटुक्रा भएका छन् । माओवादीमा आएको फुटले १० वर्षे युद्वमा समाहित भएका माओवादी कार्यकर्ता भने निराश देखिन्छन ।
माओवादी केन्द्रले वाइसियलको सक्रियतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा जनयुद्व दिवसको कार्यक्रम गर्दा माओवादीका अर्को समूह सम्हालेर बसेका मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीले भने काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा कार्यक्रम गरेको थियो ।
माओवादी जनयुद्वका अर्का नेता बाबुराम भट्टराई तथा नयाँ शक्ति पार्टीले भने जनयुद्व दिवसमा कही कतै कार्यक्रम गरेनन् । बाबुराम भट्टराई त अब सिद्धान्तमै पनि कम्युनिष्ट नभएको बताउँछन् ।
माओवादी जनयुद्वका अर्का योद्वाले नेतृत्व गरेको विप्लव माओवादीले पनि जनयुद्व दिवसमा कार्यक्रम गरेन । बरु आज विप्लवले नेतृत्व गरेको समूहले ठाउँ–ठाउँमा एनसेलको टावरमा आगजनी गरेको समाचार आइरहेका छन् । नयाँ विद्रोह गर्ने बताइरहेको विप्लव समूहले कस्तो क्रान्ति गर्ने हो त्यो भने स्पष्ट रुपमा बताएको छ्रैन ।
जनयुद्व, जनआन्दोलन, शान्तिसम्झौता हुँदै राजनीतिमा आएको माओवादीको बलले गर्दा नेपालमा गणतन्त्र आउन सम्भव भयो । नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन र राजतन्त्रलाई बिदाई गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको माओवादीको सम्मान स्वरुप ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा पहिलो पार्टी भएको थियो । गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री १० वर्षे जनयुद्वको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुनुभयो । त्यसपछि माओवादीमा खटपट सुरु भएको थियो ।
तत्कालिन माओवादी नेता मोहन वैद्यले माउ पार्टीलाइ विभाजन गरेर नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी, माओवादीको स्थापना गर्नुभयो । त्यो पार्टीको नेतृत्व मोहन वैद्यले गर्नुभयो । वैद्य पक्षले प्रचण्डको नेतृत्व जनविरोधी, दक्षिणपन्थी भएको ठहर गर्दै नयाँ पार्टी गठन गरेको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएर कुनै उपलब्धि नभएको भन्दै उनीहरुले जनविद्रोहको कार्यदिशामा अघि बढ्ने निर्णय गरेका थिए ।
माओवादी फुटको प्रभाव दोस्रो संविधानसभा चुनावमा स्पष्ट देखियो । पहिलो चुनावमा झन्डै बहुमतको नजिक पुगेर पहिलो पार्टी भएको माओवादी ५ वर्षपछि भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा तेस्रो पार्टीमा खुम्चिन पुग्यो ।
दोस्रो संविधानसभा चुनावले नेपालमा संविधान निर्माण गर्यो । नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि देखाउदै माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराइले पनि माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गर्नुभयो । उहाँले कम्यूनिष्ट सिद्धान्त नै त्यागेर प्रजातान्त्रिक बाटोमा लाग्ने समेत भन्न भ्याउनुभयो ।
माओवादीको अर्को टुक्रा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले गरे । माउ पार्टी आफ्नो सिद्धान्त नै भूलेर गलत बाटोमा हिँडेको भन्दै विप्लवको नेतृत्वमा माओवादी अर्को फुटमा गयो ।
सशस्त्र जनयुद्वको सुरुवात भएको दिनको सभ्झनामा मनाइने जनयुद्व दिवसमा माओवादीले आफ्नो युद्वमा सहादत प्राप्त गरेका योद्वालाई सम्झने गर्दछ । शान्ति प्रकृयामा आउँदा लाखौँ कार्यक्रता खुला मञ्चमा उतारेर मनाउने जनयुद्व दिवस सयौ कार्यक्रताको माझ पार्टी कार्यालयमा मनाउनु पर्दा माओवादीका नेतालाई कस्तो अनुभूति हुन्छ होला ? तर ज्यानको बाजी दिएर परिवर्तनका लागि लडेका माओवादी कार्यक्रता भने एउटै युद्वमा समाहित नेता फरकफरक कार्यक्रम गरेर एकअर्का विरुद्व खनिँदा मन खिन्न बनाएका छन् ।
२३ औं जनयुद्व दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले पार्टीको कार्यदिशामा मन नपराएर अर्कै पार्टी खोलेको पूर्व सहकर्मी मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई रहरले क्रान्ति नहुने बताइरहँदा वैद्यले भने युद्वबाट नै नेपालमा परिवर्तन सम्भव रहेको र माओवादी केन्द आफ्नो सिद्धान्तबाट बाहिर गएको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले ‘विप्लव’ र ‘वैद्य’लाई निकै कटा्क्ष गर्नुभएको थियो ।
आज संयोग यस्तो पनि परेको छ कि सेना दिवस र जनयुद्ध दिवस एकै दिन । पहिले एक अर्का विरुद्ध लडेका नेपाली सेना र तत्कालीन माओवादी सेनाले आज सँगै सेना दिवस मनाएका छन् । नेपाली सेनामा समायोजन भएको माओवादीको सानै समूहले भए पनि सेना दिवस मनाएको छ ।
लामो समय एउटै पार्टीमा रहेर नेपालको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सफल भएको माओवादीले जनयुद्व दिवसलाई प्राथमिकता नदिएको कार्यक्रताले आरोप लगाइरहदा फूट भएका माओवादी नेता भने एकअर्का प्रति कटा्क्षमा नै रमाए । खुला मञ्चको कार्यक्रम पार्टी कार्यालयमा लगेर मनाउदा माओवादीको युद्वलाई आफ्नो ज्यान आहुती दिएका र दिन तयार भएर जनयुद्वमा सहभागी भएका कार्यक्रता भने निराश भएर कटा्क्ष सुन्न बाध्य भएका छन् ।